Imbali kunye neNkcubeko 90
I-Channel Tunnel, ebizwa rhoqo ngokuba yiChunnel, yindlela yomzila wesitimela ephantsi kwamanzi eSikhululo seNgesi kwaye idibanisa isiqithi sase- Great Britain kunye nelizwe laseFransi. I- Channel Tunnel , egqityiwe ngo-1994, ithathwa njengenye yezinto ezinobunjineli ezinjengeli-20 leminyaka.
Imihla: Kuvulwa ngokusemthethweni ngoMeyi 6, 1994
Kwaziwa kwakhona njenge: Chunnel, i-Euro Tunnel
Ubume bemiSebenzi yeThaneli
Kwiminyaka emininzi, ukuwela isiNgesi ngeSikhephe okanye kwisikebhe kwakubhekwa njengomsebenzi onzima.
Isimo sezulu esingahlambulukiyo kunye namanzi amancinci angenza ukuba umntu ohamba ngeyona ndlela ehamba phambili. Mhlawumbi akumangalisi ke ngokokuba kwangoko kwakunezicwangciso eziyi-1802 ezenzelwe enye indlela eya kwiNgesi YesiNgesi.
Esi sicwangciso sokuqala, esenziwe ngumyili weFransi u-Albert Mathieu Favier, sabiza umjelo ukuba uguqulwe ngaphantsi kwamanzi eSikhululo seNgesi. Eli thuba laliza kuba likhulu ngokwaneleyo ngeenqwelo zokuhamba ngehashe ukuhamba. Nangona uFavier wakwazi ukuxhaswa yinkokheli yaseFransi uNapoleon Bonaparte , iBritani yalahla icebo likaFavier. (AbaseBrithani besaba, mhlawumbi ngokuchanekileyo, ukuba uNapoleon wayefuna ukwakha i-tunnel ukuze ahlasele iNgilani.)
Kwiminyaka emibini ezayo, abanye badala izicwangciso zokudibanisa iGreat Britain neFransi. Nangona kukho inkqubela eyenziwe kwimiba yezicwangciso, kubandakanywa ukubola kwangoku, bonke ekugqibeleni bawa. Ngamanye amaxesha isizathu sokuba ukungqubuzana kwezopolitiko, ngamanye amaxesha kwakukho iingxaki zemali.
Kwakhona ngamanye amaxesha kwakukho ukwesaba eBrithani ukuhlasela. Zonke ezi zinto zafuneka zixazululwe ngaphambi kokuba kwakhiwe iTannel yeSiteshi.
Ngowe-1984, umongameli waseFransi uFrancois Mitterrand kunye noMphathiswa waseBrithani uMargaret Thatcher bavumelana ngokuvumelana ukuba ukhonkco kwiSiteshi seNgesi kuya kuba luncedo.
Nangona kunjalo, oorhulumente babone ukuba nangona iprojekthi yayiza kwenza imisebenzi eninzi, akukho rhulumente welizwe onokuxhasa imali enjalo. Ngaloo ndlela, bagqiba ekubeni bathathe inxaxheba kumncintiswano.
Olu phiswano lumema iinkampani ukuba zingenise izicwangciso zazo zokudala unxibelelwano kwisiXhosa saseShayina. Njengengxenye yeemfuno zokhuphiswano, inkampani yokuhambisa yayikubonelela ngesicwangciso sokuphakamisa iimali ezifunekayo zokwakha iphrojekthi, unako ukuqhuba ikhonkco leShaneli ecetywayo xa iprojekthi igqityiwe, kunye nekhonkco ecetywayo kufuneka ikwazi ukunyamezela ubuncinane ubuneminyaka engama-120.
Iziphakamiso ezilishumi zithunyelwe, kubandakanywa imigudu eyahlukeneyo kunye namabhanti. Ezinye zeziphakamiso zazingekho ngobuqili kwindlela abayichitha ngayo ngokulula; Ezinye ziza kuba zibiza kakhulu kangangokuthi zazingenakwenzeka ukuba zigqitywe. Isiphakamiso esamkelekileyo sisicwangciso seTannel Tunnel, esithunyelwe yiNkampani yeBalfour Beatty Inkampani (oku yaba yi-Link Transmanche).
Uyilo lweeThuna zeShaneli
I-Tunnel yeThane yayiza kwenziwa ngamanqwanqwa amabini eendlela ezihamba ngaphantsi kwesiNgesi seNgesi. Phakathi kwezi zixhobo zombini zomzila wezitrosi zaziza kuqhubela isithintelo sesithathu esincinci esasetyenziselwa ukugcinwa, kubandakanywa nemibhobho yamanzi, iintambo zokunxibelelana, iibhobho zokuhambisa amanzi, njl njl.
Ngamanye amatekisi ayeza kuhamba ngeChunnel aya kuba nako ukugcina iimoto kunye namaloli. Oku kuya kwenza ukuba izithuthi zenzeke kwiTannel yeThane ngaphandle kokuba abaqhubi ngabanye bajongane nokuhamba kwexesha elide.
Isicwangciso sasilindeleke ukuba sihlawule i-3.6 billion zeebhiliyoni.
Ukuqala nje kwiCannel Tunnel kwakumsebenzi omkhulu. Iimali zafuneka ziphakanyiswe (iibhanki ezinkulu ezingaphezu kwe-50 zanikela ngemali-mboleko), iinjineli ezinamava zazifunyenwe, abasebenzi abayi-13 000 abanezakhono nabangenalwazi kufuneka baqeshwe kwaye bahlala kuyo, kwaye kufuneka ukuba izakhiwo zokukhangela iimoto ezikhethekileyo zenziwe kwaye zakhiwe.
Njengoko ezi zinto zenziwa, abaqulunqi bebenokufuneka baqonde ngokucacileyo apho i-tunnel yayiza kubanjwa khona. Ngokukodwa, i-geology yezantsi kweSingesi seSingesi kwakufuneka ihlolwe ngokucophelela. Kwakuqulunqwe ukuba nangona umgca wenziwe ngenqanawa yomlobo, ungqimba oluphantsi lwe-Chalk, olwenziwe nge-chalk marl, luya kuba lula ukulusebenzisa.
Ukwakha iTunnel yeSiteshi
Ukumba kweTannel yeThaneli yaqala ngokufanayo ukusuka kwiBritish kunye neFransi, kunye neentlanganiso ezigqityiweyo ze-tunnel phakathi. Ngecala laseBrithani, ukumba kwakusondele kufuphi neShakespeare Cliff ngaphandle kweDever; Icala laseFransi laqalisa kufuphi nedolophana laseSangatte.
Ukumba kwakwenziwa ngamashishini amakhulu omnatha ombane, obizwa ngokuba yi-TBMs, egawula i-chalk, eqokelele i-debris, aze athuthe i-debris emva kwayo usebenzisa amabhande okuhambisa. Emva koko le ngqungquthela, eyaziwa njengexhoba, yayiza kubakholwa phezulu ngeenqwelo zendlela zomzila (ohlangothini lwaseBrithani) okanye ixutywe ngamanzi kwaye iqhutywe ngaphandle kwipayipi (kwicala laseFransi).
Njengoko i-TBM ibenze ngesikhokelo, amacala omatsha asandul 'ukutsalwa kufuneka afakwe ngekhonkrithi. Le ngqayi yokukhonkxa yayikukuncedisa umgca wokumelana noxinzelelo olunzulu oluvela phezulu kunye nokuncedisa ukungena kwamanzi kwi-tunnel.
Enye yemisebenzi enzima kakhulu kwiprojekthi yeTannel yeTanki yayiqinisekisile ukuba kwicala laseBrithani elingaphandle kwinqanaba leFransi liye ladibanisa phakathi. Iilers ezikhethekileyo kunye nezixhobo zokuhlola zazisetyenziswa; Nangona kunjalo, kunye neprojekthi enkulu, akukho mntu wayenokuqiniseka ukuba uya kusebenza.
Ekubeni i-tunnel yesevisi yayiyeyokuqala ukucubungulwa, kwakungenxa yokuzibandakanya kwamacala amabini kule ngxube eyabangela ukuba ixhaphake kakhulu. Ngomhla kaDisemba 1, 1990, intlanganiso yamacandelo amabini yagubha ngokusemthethweni. Abasebenzi ababini, omnye waseBrithani (uGraham Fagg) kunye nomFrentshi omnye (uFilie Cozette), bakhethwa i-lottery ukuba abe ngowokuqala ukudibanisa izandla ngokuvula.
Emva kwabo, amakhulu abasebenzi bawela ngaphesheya ekubhiyozeni le mpumelelo emangalisayo. Ngokuqala kwimbali, iGreat Britain neFransi zaxhunyiwe.
Ukugqiba iTunnel yeSiteshi
Nangona intlanganiso yamacandelo amabini kwindlela yokuncedisa yayiyimbangela yokubhiyozela okukhulu, ngokuqinisekileyo akuyikuphela kweprojekthi yokwakha iThane Tunnel.
Bobabini baseBritani namaFrentshi baqhubeka bemba. Amacandelo amabini adibana nomlambo ongasenyakatho ngoMeyi 22, ngo-1991 kwaye emva kwenyanga nje kuphela, amacandelo amabini adibana phakathi kwinqanaba elisezantsi eliseJuni 28, 1991.
Kwakhona kwakungekho ukuphela kokwakhiwa kweChunnel . Imigudu yeCrossover, imigudu yomhlaba esuka kummandla wonxweme ukuya kwii-terminals, iipositi zokunceda iipiston, iinkqubo zombane, iingcango zomlilo, inkqubo yokuphucula umlilo, kunye neendlela zokuqeqesha bonke kufuneka zidibaniswe. Kwakhona, izakhiwo ezinkulu zokuqeqesha izakhiwo kwakufuneka zakhiwe kwi-Folkestone e-Great Britain naseCoquelles eFransi.
I-Tunnel yeThaneli ivula
Ngomhla we-10 kuDisemba, 1993, ukuqhutywa kovavanyo lokuqala kwagqitywa kwi-Channel Tunnel yonke. Emva kokucwangciswa okongeziweyo, iSiteshi seThaneli savulwa ngokusemthethweni ngoMeyi 6, 1994.
Emva kweminyaka emithandathu yokwakha kunye needola ezili-15 eziligidigidi ezichithekileyo (ezinye iindawo zithi ziphezulu kuma-21 amabhiliyoni), iStell Tunnel yagqitywa.
Amaxhoba e-Columbine Massacre
I-Pakistani Martyr Iqbal Masih
Biography yePablo Escobar
ULorna Bobbitt uhlawula i-Brutal
1996 Intaba ye-Everest ntlekele: Ukufa kwiNtloko yehlabathi
Iimveliso kunye neNgcembelelo yokuTyala i-Butterfly Bush
Indlela Yokuthintela Ukuxinzelela Kwengcinezelo Kwengqondo Kwakho
Imikhosi emikhulu yamaTao Deities
AmaHors aBantu bonke abafanele bawazi
Yintoni iCorporator Booster?
Ukudibanisa kwe 'Decir'
Iintlobo ze-Muscle Soreness ezibangelwa ukuQeqesha ngeZakhiwo
Sue Gravelon's Alphabet Novels, ezichazwe
Ziziphi izinto ezifunekayo ukuba ndiqalise uKayaking?
Izinzuzo zezempilo ze-Ayurvedic ze-Indian Gooseberry
I-Supersaturated okanye i-Supercooling Definition